အမေ Havearest! | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Opinions & Discussion » အမေ Havearest!	14
အမေ Havearest!
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Mar 18, 2015 in Opinions & Discussion | 14 comments
ဘာရယ်ဟုတ်ဝူး.. ဖဘမှာ မေမေစု နေမီကောင်းလို့ca လွှတ်တော် သုံးရက်မတိုင်နိုင်ဒဲ့အကြောင်း ဖတ်ရတော့ ရင်ဒဲ မခံဇားနိုင်လို့ ပေါဒါ။ ရွာဆိတ်များ ဘာလုပ်နေဂျသလဲ.. မေတ္တာ ပို့ဂျပါဒေါ့လား….။
ဆိတ်သားပဲဟင်း ချပ်ဆားမြည့် ငါကွ ဦးကြောင်ကြီး
Wow says: ကြောင်ဂိုသတ် ဟင်းချက်ပီး မေစု နလန်ထဟင်စားဖို့ သွားပို့ရမယ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1191
Kaung Kin Pyar says: ဘာဘီကျူ့လား စွပ်ပြုတ်လား…
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်…မဆလာနိုင်နိုင်ထည့်ရမယ်….။ ကြောင်သားက ညှီတယ်…
Wow says: မီးကောင်းကောင်းမြိူက်ပီး အရေဆုတ်… မဆာလာနိုင်နိုင်ထည့်.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3276
pooch says: ငရုတ်ကောင်းနိုင်နိုင်လည်းထည့်ရမယ် ဒါမှ မညှီမှာ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14409
kai says: တကယ်သာအနားယူသွားရင်.. ဘာဆက်လုပ်ကြမလည်း.. စဉ်းစားထားပြီးပြီလို့တော့.. တယ်မထင်..။
အထူးသဖြင့်.. ကကြောင်ကြီးတို့လိုလူမျိုးတွေပေါ့..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 943
မင်း ခန့် ကျော် says: တကယ်အနားယူသွားရင်
ဆိုပြီးးး စိတ်ကူးတော့ယဉ်မိသားးးး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12373
ခင်ဇော် says: စု မပါတဲ့ ဘယ်နိုင်ငံရေးကို မှ မယုံတော့။
ခင်ဇော် says: လွှတ်တော်မှ ခွင့် ၃ ရက်ယူပြီး နေပြည်တော်ကုတင် ၁၀၀၀ ဆေးရုံးကြီးတွင် ကျန်းမာရေးဆေးစစ်ခံယူခဲ့သော လူထုခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ
ဆေးစစ်ချက်အဖြေအကုန်သိရှိရပြီး အားလုံးကောင်းမွန်ပါကြောင်း..၆ လတစ်ကြိမ် ပုံမှန်ဆေးစစ်မှုခံယူတဲ့သဘောသာဖြစ်ကြောင်း..
ခွင့်ယူတာက အလုပ်ပင်ပန်းတဲ့အတွက် အနားယူဖို့သာဖြစ်ကြောင်း..ပြင်ပမှာဖြစ်ပေါ်နေသော ကောလဟလများနှင်းပတ်သက်ပြီး လူထုခေါင်းဆောင်၏ဆရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်းမှပြောကြား..
Alinsett@Maung Thura says: အမေ နားပီထားပါတော့
စိန်စိန်တို့ လှိုင်လှိုင်တို့ မန်းမန်းတို့လက်ထဲကိုရော တိုင်းပြည်ကို စိတ်ချလက်ချ ထိုးအပ်ရဲလား
သူတို့ထက် စိတ်ချရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေ အဆင်သင့် ဖြစ်ပြီးလား
အမေ့အစား အမေ့ထက်သာအောင် အူးကြောင်ကြောင်တို့ လာပြီး တာဝန်တွေ ယူလှည့်မလား
Ko chogyi says: ” လွှတ်တော် သုံးရက်မတိုင်နိုင်ဒဲ့အကြောင်း ”
တောင်ပေါ်သား says: ကြောင်ကြောင် သမ္မတ ဖြစ်လို့ကတော့ ကျုပ် သူပုန်လုပ်မယ်
မြစပဲရိုး says: တစ်နေ့က ချစ်ပါပါးဒက်ဒီ ဖေဖေ နဲ့ စကားပြောရင်း ဘယ်က ဘယ်လို ဂဏန်း အကြောင်း ရောက်သွားတယ်မသိ။
သူက ရီ ပြီးပြောတာ တစ်ခြား ဂဏန်း မျိုး တွေ က ခြင်းထဲ၊ ပုံးထဲ ထည့်ပြီး အပေါ်က အဖုံးပိတ်ထားရတယ်တဲ့။
တစ်ကောင် က တစ်ကောင် ကို ခို တွယ် ပြီး အပေါက် ထိပ်ကို ရောက်အောင် အားပြု တက်ပြီး လွတ်ကုန် လို့ တဲ့။
ဒါပေမဲ့ မြန်မာဂဏန်း တွေ ဆိုရင်တော့ အဖုံးပိတ်စရာ မလိုဘူး တဲ့။
အပေါ်ရောက် တော့ မယ် ဆိုရင် တစ်ကောင် နဲ့ တစ်ကောင် ပြန်ပြန်ဆွဲချ တတ်လို့ဘယ်သူမှ အပေါ်မတက်နိုင်တော့ဘူး တဲ့။
ထိပ်ရောက်နေသူ ကို ပိုပြီး ထိပ်တက်နိုင်အောင် ပံ့ပိုးပေးရမဲ့ အစား ဆွဲချ ဖို့ ကြိုးစားနေတာ။
သူ့ ကို အောက်မှာ ဖိထားတုန်း ကလဲ ဘယ်သူမှ ထိပ်ရောက်အောင် မကြိုးစား။
အခု ထိပ်ရောက်ခါနီး သူ ကိုလဲ ပြန်ဆွဲချ ဖို့ ကြိုးစား။ ဟုတ်နေတော့ တာဘဲ။
ကျုပ် သဘော အရဆို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို ပိုပြီး တောင် နားစေချင်သေး တယ်။
သူ နား လိုက် လို့ ကတော့ ကိုယ်လဲ ဒီ လေတပ် အလုပ် ကို စွန့်ပြီး ကွကိုယ် တစ်ခြား လုပ်စရာ တွေ အများကြီး ကို အချိန်ပေး လုပ်လို့ရတယ်။
အခုတော့ ဒီ ထဲ ဝင်ဝင်ပြီး ချောင်းလိုက် လေဗုံးကြဲ လိုက် လုပ်ရတာ နဲ့ အရင်လို ရုပ်ရှင် လေး ဘာလေး တောင် မကြည့်နိုင်တာ ကြာပေါ့။
အဓိက နိ ကို မျက်ခြေမပြတ် ကြည့်နေရတော့ တာ ကြောင်ကြောင်။
kai says: အဲဒါ.. ကကြောင်တကောင်.. အဲ.. အဲ.. တယောက်ထဲမဟုတ်..။
ယူအက်စ်မှာ..အဲလို ပန်းရောင်မရင့်တရင့်တွေ.. ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုတွေတော်တော်များတာ..။
ဘိုနေ၀င်းလည်းမကောင်း.. ဘိုသိန်းစိန်တို့လည်းမကောင်း.. ဘုန်းကြီးလည်းမကောင်း.. ကုလားလည်းမကောင်း.. တရုတ်လည်းမဟုတ်..၈၈လည်းအရူး.. စစ်တပ်လည်းငပြူး ငါကလွဲလို့အကုန်.. အာဖျံကွီးချည်း.. ငပြဲတွေချည်းလို့ဆိုတဲ့.. ငပြူးကငပြဲပြသူမျိုးတွေ…။
သူတို့ဆိတ်ကြီးပဲ… အဲ..အဲ.. ဆိတ်အ၀ှာကြီးပဲ..။ ဟိုဖက်ကပ်လိုက်.. ဒီးးးးးဖက်ခွာလိုက်..။
ဒါပေမယ့်.. အဲလိုလူအစွန်းနင်းပေးထားသူတွေရှိလို့လည်း.. မြန်မာပြည်က..အစွန်း အောက်ဆွဲတချို့နလံမထူနိုင်တာလို့…။ နားနဲ့မနာ… ဖ၀ါးနဲ့နာရန်..ခတ်ကြမ်းကြမ်းလေး..ဆေးတင်ရေးပြင်လိုက်ရကြောင်း…။
မြစပဲရိုး says: အော အော အခု မှ ကြောင်ကြောင် ရဲ့ ပါးစပ် ထဲ က ဆိတ် အကြောင်း ကို သိတော့ တယ်။
သူ ဘာ အဓိပ္ပါယ် နဲ့ ပြောနေမှန်း မသိ။
သူကြီး ရှေ့နေမင်း အပြောကောင်းပုံ နဲ့ ဒီ ကြောင်ကို ကျေးဇူးတင်ရတော့ မဲ့ ပုံပါလား။